Icala lefoni le-RFC eliyiPrinta China Manufacturer
Incazelo:Ifoni Icingo lokushicilelwa kwe-UV,Iphrinta ye-Case Sublimation Printer,Ukunyatheliswa kwe-Case Case Screen
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Ifoni yephrinta yefoni > Icala lefoni le-RFC eliyiPrinta
Ukusebenza kwefoni yethu yephrinta yephrinta ilula, elula futhi esheshayo, ukupuniza kuyomisa. Okukhiphayo okusheshayo, okuphumelelayo, okuguquguqukayo, kungabonisa ukuthungwa kombala, umbala we-gradient, umbala wombala ophakathi. ingaphrinta izithombe eziningi ofuna ukuyinyathelisa, futhi zihlobise i-case case shell / cell and cover.
1. Ukunambitheka komuntu ngamunye komuntu.Iphrinta yekholi yefoni , uma nje uthanda, yenza ubunikazi befoni / igobolondo / cell cell, ngokucacile nobuciko, phakamisa ibanga lakho.
2. Okungeyona enobuthi, engafaneleki, impilo yezemvelo. besebenzisa i-eco solvent inkinobho yokuvikelwa kwemvelo yakamuva, umbala unamafutha omuhle, awunobuthi, awunamaphilisi, ukumelana ne-UV, ukuqinisekiswa kwamanzi ngemva kokumiswa kwezingubo eziguquguqukayo, ukumelana nokushisa, ukuguga, ukuguga, ukuwa, ukuguga Ukubheka, Akukho umonakalo emzimbeni womuntu.
3.Lawula omdala uma ukhathele ukubukela umklamo. Udinga kuphela ukupholisa umklamo wangempela ngokuzithoba, ukushaya i-powder we-putty noma upende we-emulsioni, ukushaya nge-powder putty noma ukupenda kwe-emulsion kulungile. Ungashintsha izithombe ozifunayo.
4.Iba ethandwa kakhulu emhlabeni jikelele.
a. Phrinta kwi-Family Family setting igobolondo / iseli / ikhava, icala le-sofa setting / igobolondo / iseli / ikhava, igumbi lokulala, igumbi lokudlela, igumbi lezingane, umzila, isango, isembozo sezinyathelo, njll;
b. Phrinta ihhotela, iklabhu, inkampani yasendlini, isithombe senkampani, umdwebo wezinkulisa, isibhedlela sokugqoka izinwele, indawo yezitolo, njll.
Price Low A3 uv iphrinta uhlobo "non-contact" inkinobho jet uhlobo imishini digital, isicelo saso kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici eziwusizo zekhasi lethu lefoni eliyiPrinta RF-A3UV:
2. Ifoni Case Ukunyathelisa UV ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. Ucingo lwe-Case Case Sublimation Printer I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
Ukunyatheliswa kwe-Case Case Screen Okuhle kakhulu: I-CISS ngaphandle kwenkinobho ye-ink + okushicilelwa kokushicilela okuphumayo + umphumela omuhle + womsebenzisi-friendly
Ifoni Icingo lokushicilelwa kwe-UV Iphrinta ye-Case Sublimation Printer Ukunyatheliswa kwe-Case Case Screen Icingo le-iphone lishicilela UK Iphrinti yokushicilela kwe-Latte Art I-Wifi yokushicilela ikhofi Imishini yokushicilela ikhofi ye-RFC Ifoni Yocingo Lokunyathelisa Inhlamvu